SomaliTalk.com » Baaq beesha Leelkase ay ka soo saartay dilkii Dr. Axmed Xaaji
Salaaddii casar ka dib ayaa lagu qabtay guriga ugaaska beesha Leelkase ee magaalada Galdogob kulan ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen Isimada, cuqaasha, aqoonyahanka, culuma’udiinka, ganacsatada, dumarka, dhallinyarada iyo warbaahinta. Waxaana ugu horrayn goobta laga akhriyey bayaan ka kooban sagaal qodob oo beeshu ku soo bandhigtay natiijadii baaritaankii ay ka samaysay dilkii loo gaystay Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan iyo mawqifkeeda arrintaas ku aadan.
Intaa ka dib waxaa golaha ka hadlay Ugaaska guud ee Beesha Leelkase Ugaas Cali Ugaas Maxamed, Afhayeenka Ugaaska Sh. Ibraahim Xirsi Axmed iyo tiro nabadoono ah. Bayaankuna wuxuu u qornaa sidan:
Dr. Sheekh Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ah Culimada ugu caansan Soomaaliya waxaa maalintii Isniinta ee ay taariikhdu ahayd 10/01/1433 oo ku beegan 05/12/2011 lagu dilay magaalada Boosaaso asaga oo sooman maalita Caashuuraa oo soo tukaday Salaadda subax meel u dhaxaysa Masaajidka Xassan bin Cali iyo Gurigiisa, sheekhu wuxuu maalmo ka hor ka yimid Xajka.
Beesha Leelkase waxay ka soo saartay dilkaas foosha xun bayaan ka kooban qodobadan hoos ku xusan:
1) Beeshu waxay uga tacsiyaynaysaa ummadda Soomaaliyeed dilkii foosha xumaa fuleynimadana ahaa ee loo geystay Dr. Sh/ Axmed Xaaji C/raxmaan, (Allaha u naxariisto) waxayna uga mahadcelinaysaa gurmadkii, garab istaagii iyo ducadii aan kala harka lahayn ee ay geysteen.
2) Maamlintii Sheekha la dilay isla goobta duugta waxaa ka hadlay Dawladda Puntland iyo culumada labadubana waxay ku eedeeyeen dilkan ururka Al-shabaab, arintaas beeshu waxay u aragtay qodob lagu degdegay waxayna goa’aansatay inay beeshu samaysato guddi baaritaan oo madax banaan.
6) Beesha Leelkase waxay u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan in dilkii dulmiga iyo bareerka ahaa ee loo gaystay Dr. Sh/ Axmed Xaaji C/raxmaan ay fulisey, kana dambaysey Xarakada Al-Shabaabul Al-mujaahidiin, gaarahaan garabkaAmniyaadka ee madaxda u yahay Axmed Cabdi Godane.
8) Beeshu waxay u mahad celinaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay baarista iyo qabashada dambiilayaasha, waxayna ka codsanaysaa ciddii taageero ka gaysan karta qabashada dambiilayaasha dhiman inay arrintaas ka caawiyaan.
Saxiixa Ugaaska,salaadiinta iyo cuqaasha beesha Leelkase